Akriso:Fadliga Habeenka laylatul Qadriga W/Q C/Casiis Cabdullaahi. – Calamada.com
calamada June 28, 2016 3 min read
Walaalhayga muslimka ahoow waxaan halkaan idiinku soo gudbin doonaa kalmado ku saabsan habeenkaas barakaysan ee Laylatul qadrigaâ€¦
Allaah subxaanahu watacaalaa waxaa uu quraanka ku yiri â€ Waxaanu soo dejinay Quraanka habeen barakaysan, Anagoo abidba u digayna aadanaha â€ Suuradda Al-dukhaan , aayada 3 aad.
Waxa kaloo Allaah suuradda Al-qadar ku leeyahay â€ Waxaan soo dejinay Quraanka habeenka Laylatul-qadriga, oo maxaad ka ogtahay waxa uu habeenka qadarku yahay , Habeenka qadarku wuxuu ka khayr badan yahay Kun habeen, Waxaa soo dega habeenkaas Ogolaansho rabigood xagiisa ah malaaâ€™igta iyo Jibriil oo sida xukuno oo dhan, nabad iyo samaan xag Alle ka timid ayaa habeenkaas jirta illaa iyo inta waagu ka baryayoâ€.. Suuradda Al-Qadri.
Â Qadriga waxaa loola jeedaa sharaf iyo waynayn, ama waxaa loola jeedaa qadarid iyo wax jaangoyn, maxaa yeelay habeenkaasi qadarku waa habeen sharaf leh oo weyn, Allaahna wuxuu qadaraa waxa ahaan doona sanadkaas, wuxuuna jangooyaa umuurihiisa xikmmadda ku salaysan.
1.- In Allaah uu soo dejiyay habeenkaas Qurâ€™aanka kariimka ah oo ah hanuun loogu talagay basharka, waana kii ay ku gaari lahaayeen liibaantooda Aakhiro iyo Adduunba.
2.-Isticmaalka la isticmaalay qaabka suâ€™aasha iyo calaamada la yaabka oo muujinaysa qiimihiisa, â€ Maxaad ka taqaan waxa uu yahay habeenka qadrigu?!!
4.-In malaaâ€™igtu soo dagayso habeenkaas, iyagoo wada khayr, naxariis iyo barako
Haddaba maxaa kula gudboon in aad samayso ?â€¦
Walaalayaal waxaa arin haboon ah in qofka muslimka ahi ku dadaalo daacada iyo cibaadada Allaah habeenkaas gaar ahaan iyo guud ahaanba bishan barakaysan si uu fursadahaas qaaliga ah uga faaâ€™iidaysto. Sida Abuu Hurayra ( ALLaha ka raali noqdee uu ka wernayo Nabigeena (NNKH) wuxuu yiri : Qofkii cibaado u istaaga habeenka qadriga, isagoo Alle ka cabsi iyo rumayn uu Allah rumaysan yahay u samaynaya, islamarkaana Allaah ajar ka dalbaya, waxaa loo dhaafaa dunuubtisii uu hormarsaday â€.
Nabiga(NNKH) waxaa uu yiri: â€ Ka raadsha Laylatul qadriga 10ka danbe, ama sagaalka danbeâ€ Waxaa weriayay Muslim.
Xadiis kale ayaa uu Nabigu (NNKH) ku yiri: â€ Ka raadsha Laylatul-qadriga 10ka danbe, haddii hurdo idinka qaalib noqoto, yaysan kula tagain 7-da danbeâ€ waxaa weriyay Imaamu Axmed, Sheekh Albaanina wuu saxiixiyay.
Isku soo wada duub oo waxaa haboon in qofka muslimka ahi aanay dhaafin cibaada 10kaas habeen, waa fursad qaali ah, waana waqti kooban, Allaah mooyaane cid kale oo og ma jirto habenkaas uu ku beegan yahay ee saxda ah, sidaa awgeed ka faaâ€™iidayso 10kaas habeenba oo yaanay ku dhaafin, waayo haddii Allaah ku waafajiyo waxaad la mid tahay qof cibaadaysanayay 1000 habeen oo u dhiganta 83 sano iyo afar Bilood.
1.- Sida Caaâ€™isha(Allaha ka raali noqdee) warinayso , marka 10ka danbe la galo, Nabigu(NNKH) guntiguu giijisan jiray oo loola jeedo cibaada ayuu u diyaargaroobi jiray oo haweenkiisa wuu ka dheeraan jiray, si uu cibaadada ugu faaruqo.
Haddaba walaalaheyga muslimiinta ahoow ku dadaala ka faaâ€™daysashada habeenkaas, wallaahi waa fursad qaali ah haddii uu Allaah ku gaarsiiyo, waana arin laga naxo in aad ka faaâ€™idaysan wayso khayrkaas, qofkii laga xarimo khayrkeedana waa mid shalwaday oo ay u dhamaatay. Ilaahay waxaan ka baryaynaa inuu naga dhigo kuwii uu gaarsiiyo habeenkaas , kana faaâ€™iidaysta oo waafaqa hadyigii Nabiga(NNKH) ee uu habeenkaas samayn jiray.
Previous: Dhageyso Barnaamijka Faafreebka Wararka Andalus 23-09-1437 Hijri.
Next: Dhageyso Fu’aad Amiin Oo Lagu Dilay Weerarkii Hoteel Naasa-hablood.